The apps shukaansi ugu fiican. Ogow astaamaha iyo faa'iidooyinka | Ragga Stylish
Shukaansigu waa u fududahay sida ay ugu adag tahay casrigan tiknoolajiyadda iyo warbaahinta bulshada. Qaabkii hore ee isbarashada si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah laysugu soo diro loona isbarasho qoyska ayaa taariikhda gashay. Habka loo helo lammaane ama haasaawe ayaa gabi ahaanba isbedelay marka loo eego dhowr iyo toban sano ka hor. Hada dadka badankood wey isticmaalaan shukaansi apps lana kulmaan dad cusub.
Halkan waxaan kuu sheegeynaa kuwa ugu fiican codsiyada shukaansiga iyo maxay yihiin faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka mid kasta oo ka mid ah.
1 Baahan u shukaansi apps
2.5 Adeero adeer
Baahan u shukaansi apps
Sidii aan horay u soo sheegnayba, way ka adag tahay in maanta dad badan loo shukaansado, halka kuwa kalena ay uga fududdahay. In kasta oo ay u muuqato murugo, waa xaqiiqda jirkeennu waa weelka wax soo saarka aan iibinno. Taasi waa, waxaa jira kuwa ay u fududahay inay ku xirnaadaan barnaamijyadan sababtoo ah xaqiiqda ah inay leeyihiin muuqaal wanaagsan. Waxaa jira dad badan oo shukaansada wax badan sababtoo ah soo jiidashadooda jireed ee bilowga ah, laakiin marka qofka kale uu sifiican u barto iyaga, waxay gartaan in aysan mudnayn in lala sii wado.
Waana taas, nasiib daro, wax walbaa ma ahan wax jir ahaaneed. Qofka loo arko inuu yahay qof soo jiidasho leh, waa inuu ilaaliyo isku dheelitirka jirka iyo maskaxda. Faa’iido maleh inaad ahaato kan dunida ugu caqliga badan haddii aadan laheyn muuqaal jir ahaan iyo tan kale. Tani waa cilladda weyn ee barnaamijyada shukaansiga. Dadka adeegsada waxay leeyihiin saadaalin ay ku raadiyaan wiilka ama gabadha ku habboon xiriirkooda. Si kastaba ha noqotee, sawirrada muujinaya astaamaha shaqsi kasta waxay muujinayaan qaybta ay rabaan inaad aragto.
Qofku wuxuu qaadaa sawir muuqaal ah si uu ugu rakibo arji waana hubaal inuu yahay mid ka mid ah sawiradii ugu fiicnaa ee la qaaday ka dib kumanaan sawir oo dhicisoobay. Marka ay timaado la kulanka qofkaas waad ogaanaysaa, maahan oo keliya inuusan isagu ahayn sida uu sawirada uga muuqday, laakiin in shaqsiyaddiisa ay ka tagto waxyaabo badan oo la doonayo. Intaas oo dhan, jidhkeennu waa weel xumaada sannadihii la soo dhaafay waana maskaxda iyo shakhsiyadda u adeegi doonta sii wadida xiriirka.
Waxaan mid mid u qeexeynaa codsiyada ugu fiican ee hadafkoodu yahay inay kaa dhigaan inaad hesho jacayl, xiriir fog ama mid hal habeen taagan.
Barnaamijkani waa midka ugu habboon ee lagula kulmo dadka hareerahaaga ah si fudud oo qaraabo ah. Way fududahay inaad la kulanto dad aad isku dan tihiin. Waad la sheekaysan kartaa iyaga, waad gudbin kartaa sawirro waadna la kulmi kartaa (Waa maxay waxa ugu muhiimsan). Waa inaad iska diiwaangelisaa Facebook-gaaga, emaylkaaga ama astaantaada twitter-ka oo aad bilowdaa adeegsiga radar-ka si aad u ogaato dadka ku dhow goobtaada.
Radar flirt wuxuu iskudayaa inuu noqdo midka ugu saxsan markay tahay tilmaamida meesha uu joogo qofka kale, si ay ugu fududaato inaad halkaa timaado kuna dhiiri galiso kulanka
Kani waa barnaamij caan ku ah xayaysiinta telefishanka. Waa barnaamij loo adeegsado dadkaas aaminsan ee jacaylka raadsada aragtida koowaad. Waxay ku shaqeysaa nidaam fallaaro ah. Marka qof arko sawirkaaga sawirka Waxaad ku calaamadeyn kartaa burburin iyo qeybsanaan. Sidan ayaad kula xiriiri kartaa qofkaas adoo u maraya sheeko gaar ah, laakiin waa la bixiyaa.
Waxaa loo yaqaanaa barnaamijka ugu kulul adduunka. Waa barnaamijka isbeddelka ku sameeyay habka loo helo lammaane. Waxay caan ku tahay waxtarkeeda kaa caawinaysa inaad hesho lammaane, la kulan dad cusub ama balaadhi kooxdaada asxaabta ah. Waxaad ka heli kartaa astaamo kala duwan dadka kale oo waad arki kartaa haddii aad jeceshahay iyo in kale, iyadoo lagu saleynayo macluumaadkaaga xiisaha leh ee Facebook. Sidan ayaad isku dayeysaa inaad damaanad qaado kulanka lammaanahaaga kugu habboon.
Waa mid ka mid ah barnaamijyada hormoodka ka ah qaybtan. Waa nooc ka mid ah halyeeyadaas bilaabay adeegsiga markay ahayd degel. Waxay leedahay ku dhowaad 200 milyan oo isticmaale. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad la kulanto dad cusub oo aad la sheekaysato kuwa aad danaha la wadaagtaan. Waxaad ka heli kartaa dad aad hareerahaaga ka haysato. Waad ogaan kartaa dadka kale ee ay kula soo dhacaan dariiqa guriga ama marka aad aadeyso cabitaanka. Marka waad u sheegi kartaa oo ay kugu biiri karaan.
Waa barnaamij xoogaa xiiso leh, maaddaama ay haweenku leeyihiin awoodda. Barnaamijkan waa ragga oo loo iibiyo wax soo saar ahaan haweenkuna waa kuwa doorta ama aan la kulmin ama ka aqbala inay la yeeshaan sheeko fudud. Waa barnaamij madadaalo leh, laakiin sidoo kale aad loogu dhaliilo xaqiiqda ah in ragga ay isu arkaan inay yihiin shey (waa wax haweenku had iyo jeer dhaleeceeyaan). Waad kala shaandheyn kartaa raadintaada hashtags waxaadna u adeegsan kartaa geolocation si aad u hesho qofka aad raadineyso.
Waa codsi loogu talagalay bulshada qaniisiinta ah. Waa lambarka 1 shabakad bulsheed ee guurguura adduunka oo loogu talagalay raggaas khaniisiinta ah ama labada jinsiba u galmooda. Waxaad heli kartaa adeeg dhul-bixin oo kuu oggolaanaya inaad la xiriirto dadka kale oo aad la kulanto. Waa tan ugu isticmaalka badan bulshada khaniisiinta oo dhan. Waxay leedahay nooc bilaash ah iyo nooc lacag leh oo adeegyo badan leh.
Waa nooca 'Grindr' ee lesbians-ka. Kooxdani ma noqon doonto inay ka maqnaato barnaamijkeeda. Waxay u shaqeysaa si la mid ah. Qof kastaa wuxuu soo dhejiyaa sawirkiisa muuqaal oo wuxuu reebayaa calaamadda xiisaha. Tani waa waxa kaga duwan Grindr. Way fududahay in la isticmaalo oo uma baahnid inaad lacag ku bixiso.
Sidaad arki karto, codsiyadaani waa kuwo hagaagsan si loola kulmo dad cusub lagana yaabo inaad hesho jacaylka noloshaada. Waxay kuxirantahay sida aad u adeegsato barnaamijyadan, runti waxtar ayey yeelan karaan ama waqti lumis dhammaystiran. U adeegso si xikmad leh iyo wixii ka sarreeya, ixtiraam isticmaaleyaasha kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Barnaamijyada Shukaansi